Yenza amehlo akho - izindlela ezi-4 zokwenza lapho ugqoke imaski | Bezzia
Yenza amehlo akho bekulokhu kungesinye sezinyathelo ezinkulu lapho besifuna ukuqedela ukwakheka. Kepha kusuka ezinyangeni ezimbalwa kuze kufike kule ngxenye, kusaba yinto ebaluleke kakhulu kunakuqala. Ngabe ufuna ukwazi ukuthi ungabanika kanjani ukuzwakalisa okwengeziwe noma bakwenze ngesifihla-buso?
Sikunikeza izindlela ezine zokukwenza. Ukuze ngokubukeka sikwazi futhi ukubona isimo sengqondo esisizwayo ngaleso sikhathi. Kusukela imaski Imboza ingxenye yobuso bethu, singabheja kuphela ekubukeni okujulile, okusho okuningi kakhulu kunalokho esikucabangayo.
1 Ukubukeka okujulile 'ngamehlo okubhema'
2 Yenza amehlo akho ngesitayela semvelo futhi ugobe izinkophe zakho
3 Ukubheja nge-eyeliner enhle
4 Ukuhlanganisa imibala yemibala
Ukubukeka okujulile 'ngamehlo okubhema'
Ngenye yezintandokazi zethu kodwa kuyiqiniso ukuthi asikwazi ukuhlala sithwala njalo. Ngaphezu kwanoma yini, ngoba iba namandla kakhulu, ihlala ihlehliselwa imicimbi noma imicimbi yasebusuku. Kuyiqiniso ukuthi ngamunye angakubumba akuthandele, noma ngabe bafuna kanjani. Ngakho-ke, kufanele sikhethe inhlanganisela ye- amathunzi emathunzini: ecacile ezosondela endaweni enesikhumba futhi emnyama futhi enamandla kakhulu, ngaphandle. Ngaphezu kwemibala esiyikhethayo, akukho okufana nokwenza uhlaka nokumaka ulayini wamanzi ukuqedela lolu hlobo lomqondo. Akukuhle lokho?
Yenza amehlo akho ngesitayela semvelo futhi ugobe izinkophe zakho
Njengoba sazi kahle, ama-curl eyelashes Ihlala ingenye yemibono emikhulu yokwakheka kwethu. Kuyindlela yokucacisa kakhudlwana kule ndawo futhi nakanjani, ekubukeni kwethu. Ngakho-ke, ngensimbi yokugoba esivame ukuba nayo, sizowuthola lo mphumela. Uma sesikulungele, sidinga nje ukusebenzisa i-mascara encane futhi ixazululwe. Kuyiqiniso ukuthi ama-eyelashes ama-curly angahlanganiswa nazo zonke izinhlobo zokubukeka.
Kepha kulokhu siziqokomisa ngemvelo kakhulu. Ngakho-ke i-vanilla noma i-beige nemibala ephinki kakhulu ekhanyayo ingaba ngabalingani bakho abakhulu. Faka isicelo kancane khanyisa endaweni yomsele wezinyembezi bese kuba nesithunzi kodwa kufiphazwe kahle kulo lonke iso. Kuzoba umqondo ophelele ukugqoka emini.
Ukubheja nge-eyeliner enhle
Okokuqala sizolungisa ijwabu leso namathunzi. Uma kukhulunywa ngokufaka izimonyo emehlweni akho, kufanele ukhethe kahle ukuthi imiphi imibala esizoyihlanganisa. Vele, sihlala sibheja ngamathoni aphakathi noma alula emini futhi siba namandla ebusuku. Ngaso sonke isikhathi engeza okukhanyayo noma okukhanyayo engxenyeni yezinyembezi, ngenkathi wena uzokuqinisa uye komunye umkhawulo. Uhlaka olubonakala kakhulu yilolo 'lweso lekati'. Ulayini omuhle ophuma emivimbo ebheke engxenyeni yethempeli. Ukushaywa unhlangothi okungaphela ngohlobo oluphakeme endaweni yomsele wezinyembezi futhi kugcwalise nolayini wamanzi. Njalo ngendlela othanda ngayo!
Ukuhlanganisa imibala yemibala
Kwesinye isikhathi esikufunayo ukunikeza umnikelo wokuvela ekubukekeni kwethu okuhle. Yebo, singakwenza ngenxa yezithunzi ezinemibala. Ungahlanganisa ngisho ne- izimonyo ngemibala yamamaski akho! Njalo khetha imibala emibili noma emithathu. Njengoba omunye wabo ungakwazi endaweni ye-lacrimal, okwesibili kucaca engxenyeni yejwabu leso leselula.
Ukunika ukujula ukubukekaAkukho okufana nokungeza ithoni enamandla kakhulu noma emnyama engxenyeni ye-crease, kanye nejwabu leso elihleliwe. Lo ngumbono wokuqala futhi omusha wokuthi, njengoba sisho, ungahlala uhlangana nokubukeka kwakho okuhle kakhulu. Ngokufika kwekwindla, amathoni ansundu athatha indawo yokuqala. Impela usuvele unezintandokazi zakho ezinkulu! Ngayo yonke imibono esinayo, ngokuqinisekile ngeke uphuthelwe kakhulu ukungakwazi ukubeka ezindebeni zakho.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ubuhle » Maquillaje » Izindlela ezi-4 zokubeka izimonyo emehlweni akho lapho ugqoke izifihla-buso
Amathiphu okulawula izinwele ezi-frizzy
Yini ongayibona eHamburg